Fabrega oo Van Persie kala taliyey inuusan ka tegin kooxda Arsenal - iftineducation.com
iftineducation.com – Kabtanki hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal Cesc Fabregas ayaa Robin Van Persie kula taliyey inuusan ka tagin kooxda islamarkaana uu la joogo.
Robin Van Persie oo la sheegay inuu xagaaga marki la gaaro ka tagayo kooxda Arsenal ayaa lagu warramayaa in looga gacan haatinayo garoonka Al-Etixaad ee magaalada Manchester.Fabregas oo sanadki hore waqti dheer ku qaadatay inuu kooxda Gunners isaga tago, ayaa haatan saxiibkisa hore kula talinayo inuu sii joogo kooxda Arsenal,waxaana uu u usheegay inuu koobab kula guuleysto kooxda.
Arsenal ayaa wada hadallo ay mushaarka ugu kordhineyso kula jirto,iyadoo la sheegay in laacibkaasi ay si weyn isha ugu heyso islamarkaana qarka u saaran yahay kooxda heysata horyaalka dalka Ingiriiska ee Manchester City.
Si kastaba, laacibka reer Netherland ee weerarka uga ciyaara kooxda Arsenal, Van Persie ayaa xilli ciyaareedki soo dhamaaday ku guuleystay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan horyaalka Ingiriiska,iyadoo sidoo kale na uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan horyaalka dalka England.
Drogba”Macsalaama Reer Chelsea, Waan Baxay”.